musha More Formula One Drivers Bio Valtera Bottas Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi
Childhood Biography inopa Nyaya Yakazara yeF1 Race Driver uyo anozivikanwa zvakanyanya nezita remadunhurirwa “Vale".
Yedu vhezheni yeValtteri Bottas 'Biography, kusanganisira yake Yehudiki Nyaya, inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva pamazuva ake akanaka ehujaya kusvika ave nemukurumbira.
Valtteri Bottas Biography - Kubva paMazuva Ehudiki hwake kusvika kuNguva yemukurumbira.
Ongororo yeValtteri Bottas Bio inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nyaya yehupenyu pamberi pemukurumbira uye kusimuka kune mukurumbira nyaya.
Kunyanya, mukadzi waValtteri Bottas, hupenyu hwepamoyo, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvidiki-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva nezvenzara yake yekukunda mijaho. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveValtteri Bottas' biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Valtteri Bottas Nyaya Yevechidiki:
Kune Vatambi veBiography, F1 mutyairi wemujaho Valtteri Viktor Bottas akazvarwa pazuva rechimakumi maviri nemasere raNyamavhuvhu 28 kune yaimbova maneja weNastola, kuFinland.
Ndiye wechipiri pavana vaviri akazvarwa naamai vake, Marianne Välimaa uye kuna baba vake Rauno Bottas. Tarisai, vabereki vaValtteri Bottas vanotaridzika vachifara.
Sangana naRauno Bottas naMarianne Välimaa - Ivo Valtteri Bottas Vabereki.
Valtteri Bottas Mhuri Mavambo:
Sezvineiwo nechitarisiko chake uye chimiro chake, Bottas idzinza reFinn redzinza rine zvinyoro zvishoma uye akakurira kuguta rekuzvarwa kwake muNastola kwaakakurira pamwe chete nehanzvadzi yake yakakura, Laura Bottas.
Kukura muNastola mumhuri yepakati yemhuri ye4, Bottas mudiki akavandudza mafaro mumakwikwi emakwikwi kubva pazera diki uye aive nemabatiro anoshingaira euyo akazvarwa kuti ave Grand Prix mujaho.
Valtteri Bottas Dzidzo uye Yekuvaka Basa.
Panguva iyo Bottas aive akura 6 muna 1995 akatanga kuvaka basa rekumhanya neKarting mumigwagwa yeFinland yechando nechando.
Panguva iyo Bottas aive pazviri, iye akatonga akasiyana makirasi aakakwikwidza mairi ndokutyaira akananga kumusoro kuchikwata cheNational Karting cheFinland.
Nekudaro, kukunda kwaBottas muKarting - kunoenderana nemazita mashanu - kwaive kusisina kunetsekana pabasa rake rekuchikoro sezvo aisave anopfuura mudzidzi wepakati ane dosi rakabatanidzwa nezano rekuti "edza zvakanyanya nguva inotevera".
Valtteri Bottas Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Achipedza kudzidza kubva kuKarting iyo inozivikanwawo sekireshi yevatambi vemijaho, masevhisi eBottas akachengetedzwa nevaitonga veFormula 3 makwikwi - Art Grand Prix ane chinzvimbo chaakabatsira kuvandudza nekurekodha zvakakosha.
Mathetsi aya anosanganisira kuisa maviri padanho ekupedza wechitatu muEuroer uye kuhwina Masters yeForamu 3 mu2009 uye 2010 kuti uve mutyairi wekutanga kuve akahwina F3 Masters zita kechipiri.
Valtteri Bottas Bio - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Ari munzira yekumukurumbira, Bottas akapedza bvunzo dzeW Williams formula 1 timu pakati pe2011 - 2012 uye akaenderera mberi nekuita dhiri rake kuchikwata ichi mu2013 kuCanadian Grand Prix kwaakapedza wechitatu kumashure Lewis Hamilton naSebastian Vettel.
Hazvina kukurumidza kupfuura gore rakazotevera Bottas asati atanga kurwisana nematambudziko akaita sekupunzika kwemotokari mumwaka wa2014 pamwe nekukuvara kumashure kwakatsvaga kuita kuti basa rake riwedzere kuonekera mukati megore ra2015.
Kunyangwe zvakadaro, akachengetedza mamwe mapedhi ekupedzisa panguva yakaoma uye akachengetwa kuchikwata cheWilliams kumwaka wese we2016.
Valtteri Bottas Biography - Kumuka kune Mukurumbira Nhau:
Mukurumbira akatanga kufambisa Bottas mu2017 paakasainwa naMercedes kudyidzana naye Lewis Hamilton mushure mekunge uyo aimbove mujaho werudzi rwekupedzisira Nico Rosberg aenda pamudyandigere zvinotyisa kubva mumutambo.
Kunyangwe Kupinda muhombodo huru dzaRosberg uye kudyidzana naLewis Hamilton aityisa raive basa rekumusoro, Bottas ari kufamba zvakanyanyisa uye zvinoonekwa nemadzinza ake matanhatu anokunda Mercedes panguva yekunyora.
Kunyanya zvakadaro, Bottas ari kuisa kukwikwidza kune hutano nemumwe wake Lewis Hamilton sezvakaonekwa mukukunda kwaFinn's 2019 Grand Grand Prix.
Valtteri Bottas Anoda Hupenyu:
Kutanga, Valtteri Bottas akaroora panguva yekunyora. Isu tinokuunzira chokwadi nezve yake yekufambidzana nhoroondo uye ikozvino hukama hukama.
Kutanga nenhoroondo yake yekufambidzana, Bottas haazivikanwe kuti akambodanana nemumwe mukadzi asati asangana nemusikana wake akachinja mukadzi Emilia Bottas.
Vakaroorana vakatanga kusangana ndokutanga kufambidzana mu2010 apo Bottas airekodha kusimuka kwakasimba pabasa rake rekutanga.
Hukama hwavo hwakava hwakasimba pamusoro pemakore akatevera achiguma nemuchato musi wa10 Gunyana 2016.
Kusvika pawanano yavo, Emilia aive nyanzvi yekushambira yeOlympian akatanga kurekodha achionekwa muchiitiko ichi kubva achiri mudiki we15.
Kunyangwe Bottas naEmilia vachiri kutanga mhuri panguva yekunyora, ivo havana vanakomana (s) nemwanasikana (vasikana) vasina kuroora nepo hupenyu hwavo hwerudo chiri godo revanoda kuroora.
Valtteri Bottas Hupenyu Hwemhuri:
Kazhinji, Bottas akakomborerwa kuva nezvakawanda zvinhu zvikuru muhupenyu kusanganisira mhuri inotsigira. Isu tinokuunzira chokwadi chehupenyu hwake hwemhuri uye kumashure kwake nevabereki vake.
Chokwadi NezveValtteri Bottas Baba:
Rauno Bottas ndiye anotsigira baba vemukurumbira mujaho mutyairi. Ivo baba vevaviri vane mavambo ake muFinland uye vaive mubhizimusi rekuchenesa panguva yekutanga kweBottas.
Runo ane yake yega yekuchenesa kambani panguva yekunyora uye anonakidzwa padiki yemukurumbira chinzvimbo muFinland nekuve baba vaBottas.
Mutyairi wenhangemutange ari padhuze nababa vake uye anoratidza rudo rwakazara kuvabereki vake nekuvapemberera pane vezvenhau chero mukana wakapihwa.
Chokwadi NezveValtteri Bottas Amai:
Marianne Välimaa ndiamai vaBottas 'vane rudo. Iye zvakare weFinland mavambo uye ane rinotyisa basa nhoroondo yekuve anoviga. Chikurukuru, aigara achitora basa remwanakomana wake zvakanyanya.
Aive Marianne aitaura nemurume wake kuisa mari yese yavaive nayo mumabasa ekumhanya eBottas pamwe nekukanganisa nguva yemhuri yekusununguka nechinangwa chekuona kusimuka kwaBottas.
Chokwadi NezveValtteri Bottas 'Vanun'una: Bottas anongova nemunin'ina mumwe chete mumunhu wehanzvadzi yake yakakura Laura. Ivo vaviri vakapatsanurwa nemakore mashoma chete uye vane yakafanana nyaya yehucheche.
Zvakare, ivo vanogovana zvakafanana panyama maficha senge bvudzi vara uye vane inoshamisa mwero wekufanana.
Laura akaroora panguva yekunyora uye anochengeta huzhinji hwehupenyu hwake hwega uye hwakavanzika kure nemeso anotyisa evanyori vezvinyorwa.
Chokwadi NezveValtteri Bottas 'Hama:
Kure nehupenyu hwemhuri hwaValtteri Bottas, tinoziva zvishoma nezve sekuru nasekuru vake vababa naamai. Uyezve, vana sekuru vake, vana mainini uye vazukuru vake.
Vatezvara vake vakaonekwa saJukka naMinna Pikkarainen nepo pasina marekodhi evana bababa kana babamunini vaakaberekerwa kubva kumuchato wehanzvadzi dzake.
Valtteri Bottas Hupenyu Hwega:
Chii chaunoziva iwe nezve Valtteri Bottas kupfuura ake mujaho kudyidzana? Isu tinotarisa mukati mehunhu hwenhabvu. Kutanga, zvikamu zveBottas 'persona musanganiswa weVirgo Zodiac maitiro.
Iye anoshingaira, asingaregi, ane mutoro uye haana matambudziko nekuburitsa chokwadi nezve hupenyu hwake hwega uye hwakavanzika.
Mutyairi weF1 mujaho uyo anofarira kutamba hockey yechando ane zvido zvinoverengeka zvinosanganisira kutandara mumvura yakaoma nechando, kuona mafirimu uye kushandisa nguva neshamwari uye nemhuri.
Valtteri Bottas Mararamiro:
Iwe unoziva here kuti Valtteri Bottas ane anofungidzirwa mambure akakosha emadhora makumi maviri emamiriyoni panguva yekunyora iyi bio?
Matunhu eneti yake inokurumidza kukura inotora kwavakabva pamubhadharo wake uye zvibvumirano zvinosvika pamamirioni emadhora pagore.
Nekuda kweizvozvo, mujaho haana matambudziko nekurarama hupenyu hweumbozha. Zviri pachena mumashandisirwo aanoita mari. Uye kuva nezvinhu zvinokosha mamiriyoni emadhora, seimba yake yemadhora mamiriyoni gumi nemazana mashanu muMonaco.
Imba iyo ine makamuri edeluxe uye zvivakwa zvinoratidzira hupenyu hwepamusoro hwevatyairi veF1 zvinoshanda segaraji rekuunganidzwa kweBottas mota dzinokurumidza dzinosanganisira McLaren 675 At, Ferrari F40, Mercedes Benz C- 63 pakati pevamwe vatasvi vekunze.
Valtera Bottas Chokwadi:
Kuputira yedu Valtteri Bottas nyaya yehudiki uye biography, tinopa chokwadi nezvake.
Valtteri Bottas Chitendero:
Bottas haina kukura pachitendero. Nepo pasina kana zviratidzo zvinongedza kune zvaanotenda panguva yekunyora. Nokudaro, hatigoni kutaura kuti mutendi here kana kuti kwete.
Valtteri Bottas Tattoos:
Kusiyana neakawanda Formula 1 ma greats, Bottas haana ma tatoo. Kana vateveri havana ma tattoos ake panguva yekunyora. Ari parunyararo nechitarisiko chake chiri padyo chechubby uye haatore hunyanzvi hwemuviri sechinhu chinodiwa chekuwedzera.
Kunyangwe Bottas ichivaraidza sips yewaini, kunyanya mushure mekukunda mijaho. Hatimuzivi kuti anoputa panguva yekunyora.
Zvikonzero zvemararamiro akadaro muganhu pane chokwadi. Kuti Bottas ane ziso rakatarisa pakukohwa mabhenefiti ekurarama hupenyu hune hutano.
Paakapedza kudzidza pachikoro chisina kudomwa zita, Finland yakasaina Bottas kuuto ravo rekuFinnish kuti vaite basa rinosungirwa. Mutyairi wemujaho akawana chinzvimbo chemauto cheLance corporal pakapera chirongwa.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Valtteri Bottas Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinovavarira kurongeka uye kururamisira patinenge tichiendesa Biography yeFormula One Drivers.